Cancer – Page3– Healthy Life Journal
ယခင်တစ်ပတ်မှ အဆက် ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) (အတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း (၈) အရေပြားကင်ဆာ Q. အရေပြားကင်ဆာက ဘာကြောင့် အဓိကဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အရေပြားကင်ဆာကို အဓိကသုံးမျိုးခွဲခြားထားပြီး အဓိကက နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့မှုများသူတွေ၊ နေ...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) (အတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အဖြစ်များတဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. အဖြစ်များတဲ့ကင်ဆာတွေကတော့ ရင်သား၊ သားအိမ်ခေါင်း၊ အဆုတ်၊ အူမကြီး၊ ဆီးကျိတ်၊ သားအိမ်၊ သားဥအိမ်၊ အကျိတ်၊...
ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ကွမ်းနှင့် ကင်ဆာ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) (အတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ဆေးလိပ်ကြောင့် ကင်ဆာအဖြစ်များတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကင်ဆာကာကွယ်ရေးနဲ့ ဆေးလိပ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အကြံပြုချင်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသောအချက်ကို...
လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရ ချင်း(ဂျင်း)က ကင်ဆာ အထူးသဖြင့် အဆုတ်ကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ အူမ ကြီးကင်ဆာ စတာတွေကိုတွန်းလှန်ရာမှာ အားပေးကူညီတယ်လို့သိရပါတယ်။ ချင်းက သားဥအိမ်ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သေစေတယ်လို့ မစ်ချီဂန်တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ချင်းမှာပါတဲ့ ဂျင်ဂျီရောဒြပ်ပေါင်းက ကင်ဆာဆဲလ်ဟန့်တားတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိလို့ပါပဲ။...
မေး. ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်စားသောက်သင့်ပါသလဲဆရာ။ နီလာထွန်း (FB) ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသောက်ပေးရင် ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးဝလံတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို များများစားသင့်ပါတယ်။ ကင်ဆာမဖြစ်အောင်...
သားအိမ်အတွင်းမြှေးကင်ဆာနဲ့ မိန်းမကိုယ်အမိုးကင်ဆာကုသအောင်မြင်ပြီး သုံးနှစ်အကြာပြန်ဖြစ်တဲ့အဆုတ်ကင်ဆာကို သတ္တိရှိရှိရင်ဆိုင်နေသူ ဒေါ်မိမိမော်
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မှတ်မှတ်ရရ ထိုနေ့က ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် မေလ ၃ ရက်။ မေ၂ ရက်နေ့ညတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ထားသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့နေရာဒေသအတော်များများ သစ်ပင်များလဲကျ၊ အိမ်ခေါင်မိုးများလန်ထွက်၊ အိမ်အချို့ပျက်စီးထိခိုက်၊ မီးကြိုးများ ဓာတ်တိုင်များ ပျက်ကျ . . စသဖြင့်...
မှဲ့ကင်ဆာ ဖြစ်မှာစိုး . . .
ပါမောက္ခဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး ။ ကျွန်မကိုယ်ခန္ဓာမှာ မှဲ့တွေ များလို့ပါ။ ကင်ဆာဖြစ်မှာလည်း စိုးပါတယ်။ မှဲ့ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ကာကွယ်သင့်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ ။ မှဲ့ကင်ဆာမဖြစ်အောင် မှဲ့ကို စစ်ဆေးရပါမယ်။...
၂၀ဝ၀ပြည့်နှစ်မှစတင်၍ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ ပြန်ရည်ကျိတ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာနှင့် အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာ စသည့် ကင်ဆာလေးမျိုးကို ကျော်လွှားခဲ့သူ ဒေါ်စီစီမာ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀ဝ၀ပြည့်နှစ် အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်မှစ၍ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ ပြန်ရည်ကျိတ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာနှင့်အူလမ်းကြောင်းကင်ဆာ စသည့် ကင်ဆာလေးမျိုးကို ကျော်လွှားအောင်မြင်ထားသူ ဒေါ်စီစီမာက သူ၏ကင်ဆာခရီးလမ်းအစကို ယခုလို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။ “၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ် အသက် ၄၈ နှစ်မှာ ကင်ဆာစဖြစ်ပါတယ်။...